Maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wado Fahad Yaasiin? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wado Fahad Yaasiin?
MUQDISHO, Soomaaliya – Xogo hoose, oo ay heyshay Keydmedia Online, ayaa xaqiijineysa in Kooxda Farmaajo iyo Fahad hoggaamiyaan, ay dajiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhashay af-duubka iyo dilka Ikraan Tahliil Warsame, oo gacanta Nabad-sugidda ku maqann tan iyo 26-kii bishii Juun ee sanadkaan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-garsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa eedeysane, Agaasimihii hore ee NISA, ku amray in uu bixiyo faah-faahin dheeraad ah oo lagu qanci karo, kadib markii hay’adda Nabad-sugiddu baahisay in Kooxda Al-Shabaab, dileen Ikraan.
Tallaabadaas oo wadne-qabad ku noqotay, Fahad Yaasiin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay ee Farmaajo ku jiro, ayaa sababtay in Amiirka Argagixisada Xasaanadda leh, (FAHAD) uu sheego in xogta kiiska oo faah-faahsan uu la wadaagayo waxa loogu yeero “Golaha Amniga” oo ah koox isku xiran oo Farmaajo dhoodoobay, kuwaas oo aan wax kulan ah yeellan in ka badan labo sano.
Go’aankaas uu qaatay, wariyihii hore ee Al-Jasiira, waxa ay soo dedejisay dalabkii shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in xilka laga raacdeeyo, dilaaga aan nixin, isla-markaana laga xayuubiyo xilka uu hayo si loola xisaabtamo, waxaana ugu danbeyn shaqada ka buriyay Ra’iisul Wasaaraha dalka, halka xaafiiskiisa lagu furay baaritaanka kiiska Ikraan.
Tan iyo xilligaas, Kooxda F&F, hor-kacayan, waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u koreen, sidii ay kaga hortagi lahaayeen dadaallada Ra’iisul Wasaaraha ee cadaaladda loogu raadinayo Ikraan, si ay uga badbaadaan gacmaha sharciga, Farmaajo ayaana 18-ka bishaan isugu yeeray Golaha Amniga si uu Fahad Yaasiin ula wadaago xogta kiiskaan.